China JKY75 / 65EIII IV-4.0 Vacuum Extruder vagadziri uye vanotengesa | Bricmaker
Iyi modhi yekutsiva extruder michina inonyanya kushandiswa kune akasiyana zvidhinha kana mabhuroko extrusion. Uye chizvarwa chitsva chemidziyo inorema-basa ine yakaoma-plastiki extrusion. Izvo zvinokodzera zvigadzirwa zvekuvaka marara, zvakapambwa, ivhu, ivhu, matope, shale, marasha, dota, gangue uye nezvimwe.
Muchina uyu unoumbwa ne clutch, reducer, inokwira-padanho mbiri-shaft inokanganisa extrusion, pasi-chikamu sikuruu extrusion, vharuvhu yekurasa system uye zvichingodaro. Iwo matanho ekumusoro nekudzika akarongedzwa muchimiro che "T", uye iyo yekupombi yekupomha system yakarongedzwa zvakasiyana neinjini huru uye yakabatana nepombi yakavharwa. Iyo yokuderedza yemuchina uyu inoshandisa yakakosha gearbox kune yakaoma zino nzvimbo, iyo inovandudza zvakanyanya simba rekubata rezino pamusoro uye inowedzera hupenyu hwebasa regearbox. Huru mugodhi adopts zvinoyangarara mugodhi mamiriro, izvo anokunda musoro famba chinoshamisa panguva oparesheni.
Kushanda musimboti: Iyo yekumusoro-nhanho ye extruder inofambiswa ne 160 / 200kW mota, inotyaira pneumatic batira, uye kuendesa kune iyo-padanho kusanganisa shaft kuburikidza neicho chakakosha chinodzora kumhanyisa kupedzisa kusanganisa, extruding uye kucheka kweiyo madhaka; yobva yapinda mubhokisi remuchina uye ichipfuura nepombi yepombi, mweya unodhonzwa kuenda kure, uye madhaka anotsimbirirwa nedhizaini yekutsikisa kuenda kune yakadzika-danho auger. Iyo yepasi nhanho inofambiswa ne400 / 450kW mota yekutyaira pneumatic clutch, iyo inopfuudzwa kune huru shaft kuburikidza neyakaoma-zino nzvimbo yekudzora, uye yozo sundidzirwa neyepazasi-danho sikuruu auger, uye inoburitswa nekumanikidzwa kuburikidza iwo musoro weconi uye kamwene.
Rinoshanda Clay kana sintered zvidhinha / block inogadzira
Raw Zvinyorwa Ivhu, Ivhu, Matope, Shale, Marasha, Ash, Gangue
Kushanda Musimboti Kuchenesa Kuchenesa
Chigadzirwa Chekupedzisira Solid / Hollow Brick / Block, Paver Brick
Nguva yekuendesa Mazuva makumi matatu
Chitupa Chekutanga China
Pashure: JKY80 / 70-4.0 Vacuum Extruder
Zvadaro: YASKAWA Robhoti Brick Kuisira